Valin'ny fikarohana «a» - Geofumadas
Valin'ny fikarohana "a"
Remote Sensors - Manokana ny faha-6. Fanontana TwinGeo
Ny fanontana fahenina amin'ny Gazety Twingeo dia eto, miaraka amin'ny lohahevitra afovoany "Remote Sensors: fifehezana mitady hametraka ny toerany amin'ny fanaovana maodely ny zava-misy an-tanan-dehibe sy ambanivohitra". Mampiharihary ny fampiharana ny angona azo tamin'ny alàlan'ny sensor lavitra, ary koa ny hetsika rehetra, fitaovana na vaovao mifandraika mivantana amin'ny fisamborana, ...
Twingeo dia namoaka ny andiany faha-4
Geospatial? Tonga tamim-pireharehana sy fahafaham-po fatratra izahay tao amin'ny Gazety Twingeo andiany faha-4, amin'izao fotoanan'ny krizy manerantany izao, ho an'ny sasany, dia nanjary hery mitarika ny fanovana sy ny fanamby. Raha ny momba anay dia manohy mianatra izahay - tsy miato - ny tombontsoa rehetra atolotry izao rehetra izao nomerika sy ny maha-zava-dehibe ...
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 101 Next pejy